Sabti, Jun 20, 2020-Masar oo ka codsatay Golaha Amniga ee UN-ka in ay soo faro galiyaan muran kala dhexeeya Itoobiya – LaacibOnline
Sabti, Jun 20, 2020-Masar oo ka codsatay Golaha Amniga ee UN-ka in ay soo faro galiyaan muran kala dhexeeya Itoobiya
Sabti, Juun 20, 2020 (HOL) – Egypt ayaa ka codsatay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo dhex gasho muran qoto dheer oo kala dhexeeya Itoobiya oo ku saabsan biyo-xireenka weyn ee Niil.Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo xiisadaha ay kacsanyihiin kadib wadahadalo dhowr sano socday oo u dhaxeeyay Masar, Itoobiya iyo Suudaan, iyagoo ku guuldareystay inay soo saaraan heshiis ku saabsan buuxinta iyo howlgalka biyo xireenka.
Wasiirka Arimaha Dibadda ee Itoobiya Gedu Andargachew ayaa yidhi, “Annaga maahan qasab inaan heshiis la gaadho ka hor intaanu bilaabin buuxinta biyo xireenka. halkan waxaan ka bilaabi karnaa geedi socodka buuxinta xilli roobaadka soo socda.
Wareysi ay la yeelatay Associated Press, Andargachew wuxuu raaciyay, “Waxaan si aad ah ugu dadaalnaa sidii aan heshiis ula gaari lahayn, laakiin wali waxaan ku sii socon doonnaa jadwalkayaga wixii natiijo ah ee ka soo baxa. Haddii ay tahay inaan sugno dadka kale, markaa biyo-xireenku wuu sii jiri karaa sanado, taas oo aan u oggolaan doonin inuu dhaco. “
Iyadoo laga duulayo waqtiga wadahadalka, ayaa Masar waxay ugu yeertay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo faragaliso sidii loo adkeyn lahaa muhiimadda ay leedahay in sedexda dal ay sii wadaan wadahadalada si iimaan leh.
Waxay sheegtay in wadahadalada saddexda dhinac ah ay khalkhal geliyeen sababtuna tahay duruufaha aan wanaagsanayn ee Itoobiya” iyo ku adkaysashada inay sii waddo buuxinta biyo-xireenka si aan go’aan lahayn.
Masar iyo Itoobiya labaduba waxay ka dhawaajiyeen tillaabooyin militari oo ay ku ilaalinayaan danahooda, khubaradu waxay ka baqayaan in burburinta wadahadalada ay horseedi karto khilaaf.
← Nigeria: A ‘Good Setback’ – allAfrica.com
Thomson Reuters to Present at TD Securities Telecom & Media Virtual Conference →
Khamiis, Nov 5 , 2020-Ra’iisal Wasaare Rooble oo faray maamulka gobolka Banaadir dardargalinta nadiifinta jidadka Muqdisho
Isniin, Aug 3 , 2020-Dowladda Ingriiska “Soomaalida oo keliya ayaa iska leh go’aanka doorashooyinka dalkooda”